Maxaan Sheeka-faneedda u Jeclahay? – Vol: 01 – Cad: 53aad – Indheergarad
HomeMaqaalloMaxaan Sheeka-faneedda u Jeclahay? – Vol: 01 – Cad: 53aad
August 28, 2020 Cabdifataax Dhegbahaaf Maqaallo 0
Indheergarad – Ogoosto 28, 2020 – Hakisbila – Vol: 01 – Cadadka: 53aad
“Akhristuhu intaanu dhiman wuxuu noolaadaa kun nololood, halka kan aan waxba akhrin uu noolaado nolol keli ah/ A reader lives a thousand lives before he dies. The one who never reads, lives only one.” – George M. M. Martin
Weyddiintaa sare ee ciwaanka u ah qormadayda waxaa maalin dhexdaas ah i weyddiiyey mid ka mid ah saaxiibadayda iigu dhow. Maxaad sheeka-fanneeda u jeceshahay? Markaa kadib ayaan go’aansaday in aan saaxiibkay qormadan ugu jawaabo. Balse hor iyo horraan sidaan qabo waxaynu sheeko fanneeda u jecelnahay waxay xidhiidh toos ah la leedahay dhallaanimadeeda ama sababta aynu carruurnimadeennii u jeclayn sheeko xariirada; qaybta ka ah tiraab suugaaneedka qadiimka ah. Ka Afrikaan ahaan ka sokoow, Soomaalideennu tiraab suugaaneedka ab-ka-gaadhka ah hiddo iyo dhaqan soojireen ah ayeynu u lahayn, imminkana u leennahay.
Si gaara sheekooyinka hal’abuurka sarreeya ku dhisan ee lagaga hadalsiiyo xayawaanka dab joog iyo duur joogba. Sidaa awgeed horraantaba inaan sheeko fanneeda casriga ah qaddariyo oo suugaanta ugu jeclahay waxay xidhiidh qoto dheer oo aan dabooli karin la leedahay xiisahaygi yaraanta iyo sheeko carruureedka. In kastoo aan garawsanahay in dadku kala dookh iyo dareenyihiin, akhriste kastaana sababo u gaar ah dusha ku sito, haddana ogaalkayga iyo waayo-aragnimadayda dhowr sababood ayaan ka tilmaami doonaa, aniga oo mid walba kor istaagi doona, tusaalayaal fahanka soo dhoweeyana ka bixin doona.
Sida aan qabo sheeka-fanneedu keliya ma aha fan madadaallo, balse sida oo kale waa aqoon kororsi. Sheeka-fanneedda qaarkood waxaynu ugu tagaynaa iyada oo ka warramaysa tagtadii, taaganta iyo timaaddada dal gaara, dad gaara, ama dunida badankeed. Sheeka-fanneeda waa ii sida saylad, waxaan ka dheehdaa bandhigyo aragtiyo bulsho, mid siyaasadeed, caado-dhaqameed iyo mid dhaqan-dhaqaale. Akhriste ii ogoloow in aan tusaale ku siiyo. Inoo kala fur sheeko sooyaalkeedkii George Orwell (1903-1950), ee loo yaqaan Beerta Xayawaanka/Animal Farm. Sheekada Beerta Xayawaanka oo isugu jirta sooyaal iyo siyaasad, waxaynu ka dheehanaynaa kacdoonnadu sida ay ku bilawdaan iyo sida ay marka dambe ugu soo aruuraan in yar, intaasina tagrifal ba’an u samayso. Waxa aynu ka dhex arkaynaa sida himilo bulsho isbeddeldoon ahi wadaagtay hog ugu dhacdo.
Haddaba sheekadani xilligii Soofiyeedka illaa imminka waa tu aan gaboobayn oo weli ku leh saamayn muuqata nolosheenna. Bal u fiirso kacaankii gu’ga Carabta, Jamhuuriyadda Masar eeg, sida uu kacdoonkaasi ku bilawday, sida loo shiiqiyey iyo sida uu imminka ku dambeeyey iyo kali’taliska kooban ee manaafacaadsada. Geeska Afrika imoow, eeg kacdoonkii gobonnimodoon ee Erateriya iyo sida uu imminka ku dambeeyey. Eeg Madaxbannaanidii dalkaas cusubi ka qaatay Itoobbiya sannadkii 1991 iyo maanta? Bulshada dalkaasi kacdoonnaddii gobonnimodoon kadib ma gurteen midho gobeed, xorriyad, maamul-wanaag, xurmo iinsaan, sinnaan bulsho iyo caddaalad? mise qolo gaara ayaa qarankiiba afduubtay oo sandulle ku haysata? Calan xora laga taagyoo illaa maanta dalkaas doorasho kama dhicin. Bulshada dalkaasina waa kuwa ugu qaxa badan Afrika, iyaga oo goobaya gobonnimadii iyo nolosha ay ka waayeen dalkoodi. Waa halkii Hadraawi ka lahaa: “Sooyaalka taariikhdu iyadaan salguurayn!”
Goorji Orwell oo ahaa ragga ujeeddada wax u qori jirey, qudhiisa oo ka sheekaynaya sababaha uu wax u qoro waa kan. Qoraalkani wuxuu ahaa mid uu qoray goor dambe ay soo dhowaatay geeridiisi. wuxuuna yiri: “Tobankii sannadood ee la soo dhaafayba waxaan ku shuqlanaa sidii aan qoraallada siyaasadeed fan ugu beddeli lahaa. Barta aan ka dhaqaaqaana waxa ay had iyo goor ahayd dareen xisbinnimo iyo tabasho xaqdarro. Markii aan u fadhiistay qorista buug, naftayda ku maan odhan ‘waxaan soo saarayaa waxqabad faneed.’ Waxaan se wax u qoraa maaddaama ay jirto been aan rabo in aan kashifo, xaqiiqo aan rabo in aan indhaha ku soo jeediyo, oo arrinta ii horraysayna ay ahayd in aan dhego i maqla helo.” /En “What I have most wanted to do throughout the past ten years is to make political writing into an art. My starting point is always a feeling of partisanship, a sense of injustice. When I sit down to write a book, I do not say to myself, “I am going to produce a work of art.” I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing.” G. Orwell (Why I Write)
Haddii aynu ku soconno dhabbaha suugaanta qadiimiga ah ee Galbeedka, sida sheeka-faneeddu saamaynta nolosheenna shalay uga lahayd maantana ugu leedahay. Aan soo qaato buugga The Plague (French: La Peste 1947) ee uu qoray, Faylasoofkii, suugaanyahankii Faransiis-Aljeeriyaanka ahaa Albert Camus (1913-1960). Sheekadaas oo ku saabsan daacuun ka dillaacaya degmo, isla markaana galaafanaya dad badan oo bulsha weynta degmadaa ka mid ah. Sheekada waxaynu ku dhex arkaynaa sida dadka degmadu isku dhiganayaan, uguna wada baraarugsanayn cudurka. Waxaynu arkaynaa jilaaga sheekada Dr. Rieux, baraaruggiisa, dedaalkiisa, dabiibkiisa iyo shakhsiyaddiisa xariirta ee danaysa deegaanka iyo badqabka bulshada. Waxaynu arki sida saynisku ugu taaganyahay fududaynta nolosha bulshada iyo daryeelkooda. Buugga waxa kale aynu ugu tagaynaa shakhsiyadda Father Paneloux. Waa wadaad degmada laga qaddarin jirey, hase ahaatee waxaa ceebihiisi soo baxayaan kolka cudurka bulshada saaqo. Sidii badanka wadaad cadadadii ahayd, F. Peneloux wuxuu dadka degmada ku wacdinayaa in waxani yahay ciqaab iyo cadho xag Alle ka timid.
Wax lagu imtixaanayo bulshada. Qudbadaha noocaas ah oo aan badqabka iyo wacyi-bulsheedka degmada in ay waxyeelaan oo isdhigasho faafitaan hor leh keenaan mooyee; aan kab waxtar leh bulshada u tolayn. Aakhirka wadaadka qudhiisa ayaa xanuunku soo ridan doonaa! Had iyo goor dunida dhacdooyin badani waa kuwa iska soo daba noqda. Soo ifbixii gu’gii hore cudurkan safmarka Corona waa tii aynu aragnay wadaaddo waaweyn oo bulshadeenna ka dhex kacay, iyaga oo leh: xanuunkani waa cadho Alle, kaliya dadka gaalada ah ee ilaah ku caasiyey ayuu u soo degay, kuna dhici doonaa. Waa ciidankii Alle iyo hadallo badan oo caynkaa ah. Maxaase dhacay?! Daraf-ka-daraf dunida in fayraskii isaga gooshay, illayn fayras diin ma yaqaane, xaramaynka qudhiisi saamaynta xannuunkaa loo rafacay, dhulka Soomaalida iyo dal walba oo kalena dadkii tarab-tarab u soo ritay!
Haddaba sheeka-faneeddan ‘The Plague’, xanuunka ay ka hadlayso, weligiiba insaanku isaga oo mooggan si gaadmo ah ayuu ku haleelayey. Tagtadii haddaad eegto sida dhimashii madoobayd/black death ee ku dhuftay dunida badankeed qarnigii 14aad bartankiisi. Kaas oo isaga gudbay Yurub, bartanka Aasiya illaa Waqooyiga Afrika, dad aad u fara badanna ku laayey. Mar kale xanuunkii London (Great Plague of London 1665- 1666) , kii China ka qarxay qarnigii 18aad, sidoo kale isna (Spanish flu 1918-1920). Illaa aynu dhowaan iyo Galbeedka Afrika nimaadno iyo fayraskii Ebola Vires. Mayd maxaa u dambeeyey? Kaa la sii sido sow lama oran jirin? Waa innagaa maanta u wada jeedna xanuunkan safmarka ah ee Covid 19, saamayntiisa, nafaha uu galaaftay iyo sida dunidu awgii ugu kala xirantahay. Alberta Camus waa kan isaga oo degmada Oraan iyo dadkeeda buuggiisa uga hadlaya.
Hase ahaatee dhoohanaanta dadkii degmadaa weli waa midda aynu dhexdeenna uga jeedno; “Daacuunnada iyo dagaalladuba dadku iyaga oo aan iska jirin ayay haleelaan […]. Marka dagaal qarxo, dadku waxay yiraahdaan: ‘Sii socon maayo’, se waa doqonniimo waxani. Waa sidaa oo dagaal waa doqonniimo gaammurtay, laakiin sidaa lagu deyn maayo. Doqonniimadu waligeed isma dhiibto, sida dadkuba ku baraarugi lahaayeen haddii aanay mar kasta naftooda ka fikiri lahayn. Marka dhankaa laga eego, reer Oraan waxay u nolaayeen uun sida dunida kale.” /En “Plagues and wars always find people equally unprepared. […] When a war breaks out people say: ‘It won’t last, it’s too stupid.’ And war is certainly too stupid, but that doesn’t prevent it from lasting. Stupidity always carries doggedly on, as people wold notice if they were not always thinking about themselves. In this respect, the citizens of Oran were like the rest of the world.”
Halkan kala deg qoraalka oo dhammeystiran:Download
W/Q: Cabdifataax Maxamuud Cabdi “Dhegbahaaf”